Danjiraha Soomaaliya ee Yemen oo UNHCR kala hadlay dib u celinta qaxootiga |
Danjiraha Soomaaliya ee Yemen oo UNHCR kala hadlay dib u celinta qaxootiga
kulan looga hadlayay xaaladda qaxtiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen oo ay wada yeesheen mas’uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalkaasi iyo hey’adda UNHCR ayaa lagu qabtay magaalada Sanca .
Kulankan ayaa waxa mas’uuliyiinta safaaradda oo uu horkacayay Gen. Ismaaciil Qaasin Naaji ay la qaateen madaxa xafiiska UNHCR ee dalka Yemen, waxaa looga hadlay dib u celinta aan qasabka aheyn ee qaxootiga Soomaalida ee jooga dalka Yemen.
C/qadar Maxamed Cali oo ka tirsan saraakiisha safaarada Soomaalida ee dalkaasi ayaa sheegay in madaxa xafiiska Yemen ee hey’ada UNHCR ay ku wehliyeen kulanka madax kale oo ka tirsan isla hey’adda, wuxuuna intaa raaciyay in kulanka looga hadlay sida ugu haboon ee dadkaasi dib loogu celin lahaa dalkooda hooyo.
Xoghayaha safaarada Suleymaan Maxamed Cali ayaa sheegay in muhiimada kulanku ay aheeyd sidii qaxootiga doonaaya iney dalka dib ugu noqdaan loogu heli lahaa wax ay ku noolaadaan muddo Sadex bilood ah.
Danjiraha Soomaaliya ee dalka Yemen Gen Ismaaciil Qaasin Naaji ayaa u xaqiijiyay UNHCR in qaxootiga ay diyaar u yihiin iney dib ugu laabtaan dalkooda hadii hey’adda laga helo wixii fududeeyn lahaa dib u laabashadooda.
Dalka Yemen ayaa ku nool qaxooti farabadan oo Soomaali ah kuwaasoo la sheegay iney halkaasi ku heeysato dhibaatooyin dhinaca nolosha ah